कतारबाट काठमाडौं झरेका एकजना धरानमा भेटिए, एक नम्बर प्रदेश पुगेका अन्य पाँच ‘फरार’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत १३ गते ९:५५
कतार एयरवेजबाट काठमाडौं झरेकामध्ये सुनसरीमा तीनजना फेला परेका छन्। झापा, मोरङ र उदयपुरमा अरू एक-एकजना रहेको पत्ता लागेको छ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका अनुसार सुनसरीमा रहेका तीनमध्ये एकजनाको ‘स्वाब’ लिइएको छ। अन्य दुईजना सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
उदयपुरमा रहेका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको तर आइनसकेको बिपीका डेपुरी डाइरेक्टर डा. विकास साहले बताए।
फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै कतार एयरवेजको जहाजबाट चैत ४ गते काठमाडौं आएकी एक महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि अन्य करिब २ सय यात्रुको खोजीमा सरकार स्थानीय निकाय लागिरहेका छन्। एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि बाँकी यात्रुलाई पनि भाइरस संक्रमण हुनसक्ने शंकामा सबै निकाय उनीहरुको खोजीमा लागेका हुन्।
कतारबाट आएकामध्ये सुनसरीको धरानका दुईजना थिए। एक जना भोजपुर घर भई धरान बस्ने र अर्का धरानकै रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो। अर्का भने सुनसरी भोक्राहाका रहेका छन्।
धरानमा रहेकाको प्रारम्भिक परीक्षणमा कोरोना संक्रमण लक्षण देखा नपरेपछि ‘स्वाब’ लिएर ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ (घर) मा पठाइएको साहले बताए।
‘कतारबाट आएकामध्ये जम्मा ६ जना हुन्, तीमध्ये धरानका एकजनाको स्वाब लिइएको छ,’ साहले भने, ‘कोरोनाको लक्षण नदेखिएपछि स्वाब लिएर घर पठाइएको छ।’
संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका लागि बुधबार काठमाडौं पठाइएको साहले बताए।
सुनसरी प्रहरीले भने सबै तीनजनालाई अस्पतालको सम्पर्कमा पुर्‍याइएको बतायो। ‘तीनैजनालाई अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, कसैमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन,’ सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेलले भने।
तर, अस्पतालले भने एकजना मात्र अस्पतालमा आएको जनायो। अन्य व्यक्तिलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको डा. साहले बताए। साहलाई बिपीको कोरोना आइसोलेसन वार्डको इञ्चार्ज तोकिएको छ।
कतार एयरवेजबाट चैत ४ मा आएका केहीलाई भेट्टायो झापा प्रहरीले
फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै कतार एयरवेजको जहाजबाट चैत ४ गते काठमाडौं आएका केही यात्रुलाई झापा प्रहरीले फेला पारेको छ। सोही जहाजमा आएकी एक महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि अन्य करिब २ सय यात्रुको खोजीमा सरकार स्थानीय निकाय लागिरहेका छन्। एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि बाँकी यात्रुलाई पनि भाइरस संक्रमण हुनसक्ने शंकामा सबै निकाय उनीहरुको खोजीमा लागेका हुन्।
झापा प्रहरीले केही व्यक्ति भेट्टाए पनि उनीहरुको यकिन संख्याबारे भने खुलेर बताउन चाहेन। ‘केही व्यक्ति डाक्टर र प्रहरीको सम्पर्कमा छन्, संख्या भन्न मिल्दैन,’ झापाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले हेल्थपोस्ट नेपालसँग बिहीबार भने।
यस्तै, साताअघि नै फ्रान्सबाट आएका एक व्यक्तिलाई परीक्षणपछि मोरङ प्रहरीले ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा राखेको छ। अर्का एक व्यक्ति भने सम्पर्कमा आइसकेका छैनन्।
एक अपुष्ट खबरअनुसार सोही जहाजबाट आएका करिब एक दर्जन व्यक्ति चितनवन जिल्लाका हुन्। उनीहरु सबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य स्थानीय निकायले प्रहरी प्रशासनको सम्पर्कमा तुरुन्त आउन आग्रह गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरुमा ती व्यक्तिहरुको नाम र नागरिकता नम्बर सेयर गरिएको छ।
दुबै जना विराटनगरकै हुन्। ‘परीक्षणमा लक्षण नदेखिएपछि एक जनालाई घरमै राखिएको छ, अर्काको खोजी भइरहेको छ,’ मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले भने।
बाँकेका तीनजना सम्पर्कमा एकको खोजी जारी
कतार एयरवेजको सोही जहाजबाट आएका बाँकेका चारमध्ये तीनजनालाई ल्याएर क्वारेन्टाईनमा राख्न बाँके प्रहरी सफल भएको छ। तीमध्ये एकजनाको कोड स्पष्ट नभएको तथा उसको नागरिकता नम्बरको आधारमा बर्दिया ठेगाना भएको आशंकामा खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले बताए।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाबाट एकजना , जानकीबाट एक र जैसपुरबाट एक गरी तीनजनाको पहिचान गरी ल्याइएका ती युवालाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरी उपरीक्षक ओलीले जानकारी दिए।
चितवनबाट पाँचजना सम्पर्कमा
कोरोना संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजबाट नेपाल आएका चितवनका पाँचजना व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहररूलाई अहिले भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको छ।
चितवनका ६ जनामध्ये एकजना भने सम्पर्कमा आएका छैनन्। कतार एरवेजबाट नेपाल प्रवेश गरेका सुरेश गुरुङ, बुद्धिराज कोइराला, सञ्जु कँडेल कोइराला, शम्भु नेपाली र पार्वती नेपाली आइसोलेसनमा भर्ना भएको अस्पतालकाका प्रवक्ता भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए। सोही जहाजमा आएकी दिक्षा कँडेल भने अझै सम्पर्कमा आएकी छैनन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती पाँचजना र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कवारेन्टाइनमा राखिने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यससँगै कोरोना विशेष अस्पतालबाट सेवा लिनेको संख्या ८२ पुगेको छ। आजमात्रै २७ जनाले सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ। हाल अस्पतालमा ११ जना आइसोलेसन वार्डमा रहेका छन्।
भारतबाट आएका ५१ ना क्वारेन्टाइनमा
बर्दियामा भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्किएका ५१ नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। मंगलबार राति र बुधबार बिहान भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए।
भारतबाट आउँदै गर्दा नाकामा अलपत्र परेका बर्दियावासीलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। बर्दियाको मुर्तिया, पश्चिमको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका बर्दियावालाई सदरमुकाम गुलरिया, ठाकुरबाबा, मधुवन र बारबर्दिया नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनाइएको छ।
बर्दिया सदमुकाम गुलरियामा दुईजनालाई अत्यधिक ज्वरो आएपछि आइसोलेसन वार्डमा राखिएको थियो। ज्वरो घटेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रजिअ लामिछानेले बताए। यस्तै देशका विभिन्न स्थानबाट आएका झन्डै ३५ जनाको ज्वरो मापन गरी घर पठाइएको छ।